Myanmar Youth Media Club - We Rock With Skype
mymclub.netSong of the Day Pimp Us Sitemap Get InvolvedApply for Got Talent? Apply to beaDJ Apply for MYMC Mob ဆက်သွယ်ရန် Sharing is Caring Embed for MYMC Radio Radio Playlists အင်တာဗျူးHip Hopချစ်စိုး SZ (B-Lord) ရသ J Me ဇေရဲ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ9One | G Family Bobby Soxer Hlwan Paing | Rock $tar စန္ဒီမြင့်လွင် Snare Modelချမ်းချမ်း မိုးယုစံ နေတိုး ဖွေးဖွေး Jenny RockIdiots Band မိုးမိုး Reason Band Pop / RnB / Otherသိန်းလင်းစိုး သီရိ ဖြိုးဝေ သားကြီး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Bunny Phyo ရေဗက္ကာဝင်း အေသင်ချိုဆွေ သီရိဆွေ နိုင်းနိုင်းစနေ L လွန်းဝါ L ဆိုင်းဇီ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) Ar T တွေးမိသမျှEnglish ချစ်သူစိတ်ဆိုးနေလား အခန်းနီ (Jily) နှင်းဆီနီနီသက်သေတည်လျက် မြန်မာ့ဂီတရေစီကြောင်းအနှစ်၂၀ ဆုံနေကျ လပြည့်ည ချစ်ခြင်းသံစဉ် ထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းည HappyNewYear ချစ်သူ ကမ္ဘာပျက်ည၏ တစ္ဆေကလဲ့စား Bus ကားပေါ်ကအလွဲများ Facebook မှာ ဓါတ်ပုံတင်မယ် စပ်မိစပ်ရာ တိုလီမုတ်စ ပုံသွင်းသူများ ဂိမ်းPortal Flash Demolition City ProgramsMYMC တစ်နှစ်ပြည့် BD 2010 Valentine's Special Singapore မှာ ပညာရှာ MYMC Singapore Pool Party MYMC ရေဒီယိုအထူးအစီစဉ် ရယ်မောစရာ MYMC on Voice of America Mother's Day 2010 Helping Hands Helping Hands2Valentine လက်ဆောင် Favorite DJ MYMC ၂ နှစ်ပြည့် နှင့် Song Helping Hands3We Rock With Skype Got Talent? us VS them Helping Hands4MYMSTARPo Po ထိုက်ထိုက် နေခြည် MiMi Akemi MYMC 2nd Theme Song Random Madness MYMC လေးနှစ်ပြည့် BD TechSong Download Trick Non-iPhone Stream iMYMC MYMC Persona for Firefox Ringtones စာမျက်နှာ Wallpapers (2010) MYMC Toolbar 2.0 MYMC Radio Embed Code Android for MYMC Radio Radio တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လဲ Knowledge101Miley Cyrus Adolf Hitler Diego Forlan ဦးသန့် UFO Bill Gates ဘဘဦးသုခ David Copperfield The Most Extreme: Speed Christmas Bermuda Triangle ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၂ Albert Einstein America’s Serial Killers! Mahatma GandhiMahatma Gandhi 1 Mahatma Gandhi2Seven Wonders Of The World Steve Jobs Mymhot Wall Skip to content
PoorBest We Rock With Skype
Wednesday, 30 March 2011 02:16	Written by amedeo	Special_sec	- Special Programs	TwitterSocButtons v1.4
တစ်ခါတစ်လေ သီချင်းတောင်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲက ပြော ချင်နေတာနဲ့ DJ ကပြောပေးတာနဲ့မတူခဲ့လို့ရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ရင်လည်း ကိုယ့်နာမည်ကော ကိုယ်တောင်းပေးတဲ့သူ နာမည် ကော မှားသွားလို့စိတ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိလား။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိတာတွေကို သီချင်းတောင်းရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် ၀င်ပြောလိုက်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးလေးတွေ မခံစားခဲ့ရဘူးလား။ MYMC ရဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ (Sound Engineer) DJ - O Willy ရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ အခုဆိုရင် MYMC ရဲ့ DJ တွေက Skype ကို အသုံးပြုပြီး Direct သီချင်းတောင်းဆိုမှုတွေကို လက်ခံနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမယ့် တစ်ခြားနိုင်ငံက မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက် Skype ကို အသုံးပြုပြီး သီချင်းတောင်းရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို Radio က တဆင့် ထုတ်ဖော်နိုင်ပြီပေါ့။ ဒါတင်မဟုတ် ပဲ လူငယ်ရေးရာ စကားဝိုင်း၊ အောင်မြင်သူတို့ရဲ့စကား၊ အနုပညာရှင်တွေ အင်တာဗျူး၊ Stars Online လိုမျိုး Direct အနုပညာရှင်တွေနဲ့ စကားပြောနိုင်အောင် MYMC က တစ်ကယ့် Live အနေနဲ့ စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ။ လန်းတယ်ဟုတ်? ကဲ Skype မရှိသေးတဲ့ MYMC ပရိတ်သတ်တွေ Skype ကို Download ဆွဲ၊ Install လုပ်ပြီး၊ Acct ဖွင့်ပြီးတော့ mymc.onlineradio ကို add ထားရုံပါပဲ။ Direct သီချင်းတောင်းဆိုနိုင်တဲ့ အချိန်တွေကတော့ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်း ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီ (Singapore စံတော်ချိန်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. MYMC ရဲ့ We Rock With Skype အစီအစဉ်နဲ့အတူ တစ်ယောက်သောသူကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သီချင်းတောင်းပေး လိုက်ရအောင်နော်။
Download Skype for Windows
Download Skype for Mac
Download Skype for Linux
English & Unicodeချစ်သူ စိတ်ဆိုးနေလားအခန်းနီနီနှင်းဆီနီနီ သက်သေတည်လျက် (Craton)မြန်မာ့ဂီတရေစီကြောင်းအနှစ်၂၀ (BBC)ဆုံနေကျ လပြည့်ညRingtones စာမျက်နှာချစ်ခြင်းသံစဉ်Helping Handထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းညရဲ့ စိတ်ကူးသံစဉ်HappyNewYear ချစ်သူကမ္ဘာပျက်ည၏ တစ္ဆေကလဲ့စားSpecial Valentine 2011Favorite DJMYMC ၂ နှစ်ပြည့် နှင့် Theme SongBus ကားပေါ်ကအလွဲများWe Rock With SkypeGot Talent?us VS themPo PoFacebook တင်ရန် ဓါတ်ပုံရိုက်နည်းများထိုက်ထိုက်စပ်မိစပ်ရာ တိုလီမုတ်စMYMC 2nd Theme SongDisney for HolidaysAndroid for MYMC Radioပုံသွင်းသူများနေခြည်Radio တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လဲRandom MadnessMiMi AkemiMYMC လေးနှစ်ပြည့် BD	Enter your email address:
Content View Hits : 8510665
Latest Playlists »
Duet Songs 2	For You (မင်းအတွက်ပါ) - ၄	အိပ်စက်ပါချစ်သူ	Wicked Beats for Hot Summer	ကမ္ဘာထဲက မြန်မာ	Dubstep in the House	Best Popular Hits 9	Knowledge 101 »
Steve Jobs	Seven Wonders Of The World	Mahatma Gandhi	America’s Famous Serial Killers!	Albert Einstein	ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၂	Bermuda Triangle	MYMC ကို Google+ မှာလည်း Follow ပါ
GavickPro © Template. Design tweaks by psycraft | Managements by mahuyar